"हिजो गाई व्यायो" आमाले भन्नुभएको । | Hamro Patro
लेखकः सुरज सुवेदी
भोजपुर तर हाल बिराटनगर
"के पायो?" मैले सोधे ।
"छोरी । सपक्क परेकी आफुजस्तै कोईलि छोरी ।"
बोलीको लवज सुन्दा थाहा हुन्थ्यो आमा खुशि हुनुहुन्थ्यो ।
कोईलि गाई थियो हाम्रो घरमा । हामी सानो हुँदादेखिनै पालेको । वच्चा हुन्जेल उसको सिङसँग डर लाग्थ्यो हामीलाई । भरसक उसको नजिक नपरी परपर भाग्थ्यौ । तर घाँस काट्न सक्ने भएपछि दुरि कम भयो । घाँस हालेको गुन कोईलिले विर्सिएन । चिन्न थाल्यो । मित्रता झाङ्गियो । 'कोईली' भन्दै टाँङमुनिवाट छिर्दा पनि केहि गर्न छोड्यो ।
भोक लाग्यो भनेर कोइली कहिल्यै कराएको याद छैन । दिनभर खान नपाउदा पनि उसको पेट कहिल्यै टाँसिदैनथ्यो । सानो कदको होचो पुन्टे गाई वाच्छो चाटेरै अघाउथ्यों । गाँउका मान्छेले नाम राखिदिएका थिए¸ 'सन्तोकी गाई' ।
विठ्याई नभएको होईन । कोईली दुध लुकाउथ्यो । उसले ढाड कुप्रो पारेर बल गरेपछि दुधको छिर्कै झर्दैनथ्यो । बाच्छोले खाएको थुनपट्टि भने दिन्थ्यो ।
"बानि बिगारेको तपाईले हो, अलिकति दुहेर छोड्दिहाल्नुहुन्छ अनि ।" आमा बुवासँग रिसाउनुहुन्थ्यो ।
"ठिकै छ । वाच्छो हुर्काउछ ।" बुवाको रेडिमेट जवाफ थियो यो ।
मैले पनि दुध दुहुन कोहिली गाईकै थुनवाट सिके । दुईचारपटक लात्ति पनि हान्यो । गल्ति मेरै रहेछ । नङ नकाटी दुहेको कुरो वुवाले थाहा पाउनुभयो । गाली गर्नुभयो । नङले थुनमा चोट लागेकाले पो रिसाएको रहेछ गाई ।
कोईली वुढि हुँदै गएको थियो । हामिले जानिकनै आठ वाच्छा, वाच्छि जन्माईसकेको । अगाडि तीन होला । 'एघार बेते' भन्थे सवैले ।
एकदिन सुँईके खेतमा चर्न गएको वेला कोईली बितेछ । गाँउलेले मरेको खवर सुनाईदिएन् । उकालो चढ्ने वेला नसकेर ढलेछ अनि उठ्न सकेनछ । देख्नेहरुले भनेअनुसार सँगै चर्न गएकी वाच्छि कस्तरी अत्तालिएर यता र उता कुदिछे । कसैसँग सहयोगको याचना मागेजस्तोगरी । बुवाहरू हेर्न जाँदा कोईलीको लाश नजिकै उभिईरहेकि थिई रे । सानै त थिई । कोईलीलाई पुरेर उकालो ल्याउने वेलामा घर आउनै नमानेकि रे । आमा त सुनेर रूनुभएछ ।
आमाले फोनमा सुनाउदा म भावुक भएको थिँए । कोईली निकैबेरसम्म दिमागमा घुमिरह्यो ।
कोईलीले वहर तथा वाच्छी दुवै जन्मायो । कुनै काला तथा कुनै झालि त कुनै मालि । तर अन्तिमपटक जन्माएकि बाच्छि भने कोईली थिई । त्यहि खेतमा यताउता अत्तालिएर कुद्ने । ठ्याक्कै आमाजस्तै । रूप,स्वभाव, व्यवहार सप्पै । दशैमा घर जाँदा पुरानै गाई नयाँ भएर आएजस्तो लागेको थियो । अवतार नै जस्तो ।
सानी वाच्छी वढ्दै गएसँगै गाईको थलामा रौनक आयो । 'बाबा' राखिदिनुभएछ आमाले नाम । उ सवैकि बाबा भई । हामीले 'सानि कोईली' पनि भन्यौ । उसका नाम धेरै भए
उ प्यारि हुँदै गई । उसको दाजु र सानिमा पनि थिए¸ बुबाले वेचिदिनुभएछ । उनिहरू सारै छुच्चा थिए । हान्थे । त्यसैले माया लाएनन् । सानि कोईलि भने विल्कुलै भिन्न । उसलाई हामी गएर कन्याईदिए आनन्द लाग्थ्यो । हामिले खाएको हेर्दै बल गर्थि । जे खुवाईदिएपनि खाने । अझ खोले दिँदा त भुस उघाएर खुवाईदिनुपर्ने । खस्रो जिब्रोले चाटिचाटि खान्थी।
घरमुन्तिर सुर्काका गरा थिए । बाँसले वारेको थियो वरिपरिवाट । कोईलिलाई त्यहि लगेर पगाहा लगाउनुहुन्थ्यो बुवा । मान्छेले काटेजसरी मिहिन पारेर घाँस चर्थि उ । त्यति गरेर थोरै पानी दिनासाथ अघाईथाल्थि । पाल्नलाई सारै सजिलो ।
फेरि थलामा लगाईदिएको घाँस पनि छर्दिनथि । खोले घोप्ट्याएको थाहा छैन । बिस्तारै हामी छोराछोरी पढ्नलाई शहर निस्किएपछि कोहि घरमा भएनौ । । उ नै घरकी छोरि थिई ।
हामी दशैमा घर जाँदा उ ब्याउने थिई ।
आमा अफिसवाट आउनसाथ 'बाबा' भनेर वोलाउनुहुन्थ्यो । उ चंख भएर हेर्थि ।
दशैं सकिएपछिको एकदिन:
बाबाले घाँस खाईन । पानी पनि खाईन । स्वाँ स्वाँ गरेर नाकबाट हावा मात्र फालिराखि । बसेपछि उठ्न र उठेपछि वस्न सकिन । जिउ थेग्न नसकेर थर्थर काँपेजस्ति भई । हामि चिन्तित भयौ, बाबा विरामी परि ।
भोलिसम्म हेरौ भन्ने कुरा भयो । तर भोलिपल्ट पनि निकै भएन । आमा राती वाह्र वजे हेर्न जानुभएछ । त्यसरिनै उभिईरहेकि थिई रे !
भोलिपल्ट बेलुकीपख दबाई खुवाउने भयौ । पेटको वाच्छालाई असर गर्छ कि भनेर पर्खिएका थियौ । निको नभएपछि जोखिम लिनैपर्यो । उसलाई मनपर्ने केरामा दबाई मिसाएर खुवाउन खोज्यौ । निल्नै सकिन । घाँटिमा केहि अड्किएजसरी खोकिरहि । जेनतेन तातो पानिले ठेलेर खुवायौ ।
भोलिपल्ट पनि दबाई खुवाउन उस्तै चर्को पर्यो । पर्सिदेखि परेन । कलिलो घाँस खाने भई । उसलाई विहानै कलिलो घाँस खुवाउन शितमा घाँस काट्न पनि गए । बाबा निको भई ।
तिहारमा उसलाई पुजा गर्यौ । पुजामा भन्दा पनि नाङ्लाको रोटिमा वल गरि उसले । टिका, माला लगाईदिएर सिँगार्यौ ।
तिहार सकेर यता फर्कनेवेला "चाँडै ब्याउनु है" भन्दै कान तान्देर हिँडेको थिए ।
पछि आमाले फोन गरेर सुनाउनुभयो ।
" के पाईन्? " मैले सोधेको थिँए ।
"छोरो ।" आमा हाँस्नुभएको थियो ।
आमाको फोन आयो। उहाँको आवाजमा मिसिएको गम्बिरताले मलाई बिचलित पार्यो ।
"वोलि मधुर छ त , के भयो? विरामी हुनुहुन्छ?" मैले सोधेँ ।
"दुखद खवर छ कान्छा ।" उहाँ भक्कानिनुभयो ।
"के भयो?" म आत्तिए । "बाबा लडेर मरेछ ।" निक्कै साहास गरेर आमाको वोलि निस्कियो ।
मेरो वरपर चकमन्न भयो । केहि सोच्नै सकिन । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो "कहिल्यै चर्न नजाने ठाँउमा गएर लडेछ" सँधै आउने गाई बेलुका घर आएनछ । कहाँ गयो भनेर भोलिपल्ट खोज्दा मृत भेटिएछ ।
"वाच्छो? " मलाई बाच्छोको पिर पर्यो ।
बाच्छो एकमहिनाको मात्र भएको थियो । दुधदानी किनेर दुध खुवाउन थाल्नुभएछ । आमाको काखमा अर्को बच्चा थपिएको थियो ।
बेलुका फेरि आमाले फोन गर्नुभयो । गाँउबाट सानो कोईलो बाच्छि किनेर ल्याउनुभएछ । खुशीको कुरा त्यसले सानो बाच्छोलाई हानेनछ ।